Taxanaha Taariikhda | Voice Of Somalia
Category Archives: Taxanaha Taariikhda
Baarlamaanka Muqdisho oo Gacmaha iskula tegay kadib markii lasoo Bandhigay Mooshinka Ka Dhan ah Cabdiweli Sheekh
Wararka ka imaanaya xarunta baarlamaanka DF-ka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xiisada udhaxeeya xildhibaanada ay ka dhaceen gudaha hoolka shirarka.
Wariyaal ku sugan xarunta baarlamaanka ayaa sheegay in xildhibaanada kala taabacsan Xasan Sheekh iyo Cabdi Wali Sheekh ay gacmaha iskula tageen kadib markii lasoo bandhigay mooshinka ka dhanka ah xukuumadda.
Shir guddoonka kulankii maanta ayaa si degdeg ah ugu dhawaaqay in kulanka lasoo xiray iyadoona la arkayay ciidamada shisheeyaha AMISOM oo xildhibaanada kala celinaya iyadoona marmarka qaar xildhibaanadu ay dhagxaan isku tuurayeen.
Saraakiil ka kala socotay xafiisyada madaxweynaha iyo R/wasaaraha ayaa kulanka lagu dhax arkayay waxaana loo malaynayaa in lacago ay ku kala gadanayeen xildhibaanada.
Book on apostasy in Islam earns writer the moniker‘SOMALI’S SALMAN RUSHDI’
Ma sah-lana in la saadaaliyo halka ay ku gabagaboobi karto ciyaarta siyaasadeeda xilligan ka socotay Muqdisho. Heer kulka magaalada ayaa maalmahan jawi ahaan aad u kululaa. Waa u dhaqan xilligan oo kale kulaylkaasi Muqdisho. Hase ahaatee waxaa intaas dheer jabaqda ka soo yeeraysa Villa Somalia.
Waxaa aad u muuqda is -herdiga siyaasadeed ee Madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’isul wasaaraha Cabdiweli Sheekh Axmed oo uu magacaabayMadaxweynuhu. Maxaa khaldan? Muxuu muranka iyo khilaafka la sheegayaa salka ku hayaa….Maxaa la isku hayaa?
Waxaa muuqda in wax badan oo aan laga war-haynin jiraan. Ma heshiiskoodii hore ayaa labadan nin xumaa..? Boowe maxaa kuu baxay? Warde Belo.. Miyaan dhahnaa? Now Now… iska eeg miyaa xaalku … Mise Areey si quman isaga daymoo? Mise sidii Maki Xaaji banaadir ayaan dhahnaa Bacdaa dhuuqso…?
Ra’isul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed kolkuu ka soo rakaabsanayey diyaaradii uu u soo raacay Muqdisho ee hamiga ah inuu soo doonto jagada uu caawa ku fadhiyo muxuu niyada iska lahaa? Siyaasada qof waliba si ayuu ku soo galaa ma ahan wax si sahlan lagu helo awooda hogaamintu. Qof surun iyo wado dheer ayuu u soo maraa, waa loo soo rafaadaa…. Maal iyo maskax badan ayaa loo huraa.. Ogow e ciyaar ciyaar laguma helo.. Ragga qaarkiis dhiig ayeyba u daadshaan wali
Laakiin la kala nasiib badan…. Cabdiweli Sheekh Axmed si fudud ayuu ku helay isagoo ahaa shaqsi aan hore looga baran masraxa siyaasada.. Wax qarash ama dhaqaale ah oo ka badan tigidhkii diyaarada uu ku yimid Jeda/ Sacuudiga ugama bixin siduu kursigaas ku heli lahaa……
Kooxda Dam-Jadiid ha ku sooo xushaan Cabdiweli Sheekh Axmed inay ku fogeeyaan dad kale oo ay colaad siyaasadeed u hayeen amaba si kale wax ha isu tusiyaane qalinkoodii ayaa wuxuu qoray Cabdiweli Sheekh Axmed. Markaas ayey ku baraarugeen Qalwadii mas ayaa galay….
Durba waa la is qaniinay. Waxa ugu badan oo la isku hayey ayaa ahayd qaabka loo gaarayo higsadka 2016.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo ragiisii waxay noqdeen gacan ku gabad. Wasiirkii Amniga waa is casilay kolkii wadna qabad uu ku noqday amnigii waxba lagama qaban….
Waxaa laga Tashan Madaxweynaha oo dhanka Cabdiweli Sheekh Axmed ka timid magcaabidii wasiirada banaanaa magcaabidooda.. Weli waa dhaban hays kooxdii Dam-Jadiid waxaana dhan walba ka hafiyey duufaanta rafashada siyaasada ee qoomamadoodii noqtay Saacidkaygii maxaa nagu diray oo aan booska uga qaadnay. Beesha Caalamka ayaa wadna goysay Xasan Sheekh Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana dhinac walba ka daqray khaladaadka siyaasadeed ee uu ku raftay.
Waxaa xilkii laga qaaday Taliyaashii nabadsugida iyo Booliska , maalmo ka dib waxaa la eryey Taliyihii Nabadsugid ee cusbaa….
Madaxweyne Xasan Shiikh[/caption]Dharbaaxa siyaasadeed oo daaduumisay Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Dam-Jadiid oo xiligii doorashada ka soo adkaaday rag badan oo siyaasada kula tartamayey ayaa indhaha kaga keentay hoor ilmo ka soo qubatay, kuwaas oo maal iyo maskaxba geliyey siday u helilahaayeen madaxnimaa dalka……
Dabaalato biyaha hoosteeda ayey iska aragtaa waa la isku maqnaa .. waase la wada socday.
SIYAASADDA QOBKA MOOSKA.
Siyaasada dibirta badan waxay ahayd mid la isku gaad gaadayo…. safarkii Ra’isulwasaare Cabdiweli Sheekh ee uu Puntland ku tegey tuhun ayaa ka dhashay.. Waa la isu khuurinayey, Xasan Sheekh iyo ragiisa waxaa ku taagnaa waxa loo yaqaan New Deal….. Cabdiweli Sheekh waxaa isagana ku taagnaa goormaa mindida lagu saari doonaa. Wuxuu ahaa mid u nuglaaday siyaasada qobka mooska la isu dhigayey.. Gabgabadiinaa wuxuu qaatay go’aanka ah inuu isku shaandhayn sameeyo si uu usha xaska ugu dhifto ha ka soo baxaane waxa ku jirey… Oo uu aaminsanaa markuu waxyaabo badan isu geys-geystay inuu madaxa goyn karo maska ka soo baxaya xaska ama jabadka uu usha ku garaacay.
durbadiiba waxaa diiday Madaxweyne Xasan Sheekh go’aanka uu qaatay Ra’isulwasaarihii uu gacantiisa ku magacaabay…. Rafashada siyaasada ayaa bilaabatay… danta ayaa dhahaysa in la isla aado Barlamaanka oo ah goobta lagu kala baxo rafasha siyaasadeed kasta oo timaada…. Waa fagaare Allow Ninkii Roon Reerka u reeb.
BAL DADYOHOW ADUUNKA
LABADII IS DOORTAA
ISU DAACAD MA AHOO
IYAGAA IS DILAYAAA
Waxaa qoray Abdishakur Mire.